Xidhiidho Qarsoodi ah oo u Bilaabmay Isbahaysiga Isbedel Doonka KULMIYE Iyo Xisbiyada Mucaaridka | Saxil News Network
Xidhiidho Qarsoodi ah oo u Bilaabmay Isbahaysiga Isbedel Doonka KULMIYE Iyo Xisbiyada Mucaaridka
November 13, 2015 - Written by admin
Hargeysa ( SLL/Yool)_WararWargeyska Yool ka helay ilo rasmi ah, ayaa tibaaxay in dhaq-dhaqaaqyo hor dhac ahi oo gooni-gooni ah u bilaabmeen garaabka Isbahaysiga KULMIYE ee dhowaan qaadacay shirkii golaha dhexe ee Xisbiga, iyo sidoo kale, labada Xisbi Mucaarid ee Ucid iyo Waddani. Ma jiro Warar amuurtan ku saabsan oo kasoo baxay dhinacyada la sheegay in kullamadu dhex mareen.
Hase-yeeshee, sida xoggaha lagu sheegay Xubnaha ku bahoobey isbahaysiga Dimu-quraadiyad doonka ah, oo iyagu hore guddi dhexdooda ah u saaray indho-indheynata iyo ka talo bixinta mustaqbalkooda siyaasadeed, ayaa sida wararku tibaaxen wax ay xidhiidho gooni-gooni ah oo hor dhac ah la sameeyen Masuuliyiin sarre oo ka tirsan labada Xisbi Mucaraad, walow illuhuu ka gaabsadeen inay xuseen xubnaha Mucaaridka ee kullamada la yeeshay Masuuliyiinta is-bahaysiga Is-bedel doonka ah.
Waxa kaloo, Wararku intaa ku dareen in kullamada dhinacyadani yeeshen qaarkood dhaceen shalay ila Xalay, halka qaar kale-na xuseen in xidhiidhada is-bahaysiga iyo Mucaaridka uu taxnaa, tan iyo markii ay xubnaha isbahaysiga u cadaatay in Qasriga Madaxtooyaddu go’aansaday in Muuse Bixii aan cidi kula tartamin Musharaxnimada Xisbiga KULMIYE.
Inkastoo sida xogguhuu ka dhawaajiyeen uu hadda bilow yahay dhaq-dhaqaaqyada indho-indheynta ah ee xubnaha isbahaysigu ku sahan-sanayaan Jabadkey u digo-rogan lahaayeen, hadana sida yaalaba dhacda is-bedellada siyaasiga ahi ma noqdaan kuwo intaa badan si fudud ku dhamaada, sababo badan oo masiiri ah awgood, kuwaasoo qolo-waliba geesteeda u dhawrayso meelmarinta go’aanada la xidhiidha rabi-taankooda.
Si kastaba aha ahaatee oodi jiidis iyo qaadis waa isla guri geyn’e, waxa arrimuhuu kala cadaan doonaan Bilaha soo socda.
Xigasho Wargeesk Yool